Isitshizi umpu luhlobo lwezixhobo ezisebenzisa ngokukhawuleza ukukhutshwa kolwelo okanye umoya ocinezelweyo njengamandla. Ingasetyenziselwa ekwakheni ukutshiza kwaye sisixhobo esisemgangathweni kwinkqubo yokuhombisa. Ingasetyenziswa kwicandelo lokutshiza iimoto, njengokutshiza ngokulungisa iimoto, ukutshiza ngeemoto i-OEM, ukutshiza kwezithuthi zikaloliwe, njl. Njl. Kungasetyenziselwa ukutshiza kwesinyithi, ukutshiza ngeplastikhi, ukuphalaza kwemveliso yeenkuni, ukutshiza kwamashishini, ukutshiza okwenziwa kwezinto ze-nano, Ukutshiza ubugcisa kunye namanye amasimi.
Umkhonto wokutshiza uphuhliswa ngokuphuhliswa kweshishini lweemoto kunye nokwemba. Kwiminyaka yakutshanje, ngokuphuhliswa kwezithuthi zeemoto kunye namashishini okuloba, ishishini lokuphulula umpu liyakhula, iindidi zemveliso ziyanda, amasimi ezicelo ayanda, kwaye kuboniswa ezi mpawu zilandelayo:
Intshona Melika, iYurophu neAsia zezona ntengiso ziphambili zabathengi. Imfuno yokusetyenziswa kwesibhamu sokutshiza ikakhulu ivela kwimimandla yeemoto, ukwakhiwa, ukuveliswa kwemveliso yeenkuni kunye neemveliso zemizi-mveliso. Imeko yokusebenzisa unobuhlobo obukhulu kunye nophuhliso lweentengiso ezantsi. Ukusukela ekuphuhlisweni kwentengiso esezantsi, kunokubonwa ukuba uMntla Melika, iYurophu kunye neAsia zezona ntengiso ziphambili zabathengi beenqwelo moya, kunye nesidingo esikhulu sokusebenzisa.
I-Asiya ngowona mmandla ubonelela ngawo. Ngophuhliso lwentengiso yemipu yokutshiza eMntla Melika naseYurophu, i-Asia iye ngokuthe ngcembe iyeyona ndawo iphambili yokuhambisa umpu kwihlabathi phantsi kwendlela yotshintshelo lwemizi-mveliso. Phakathi kwazo, iChina izuze kuphuhliso lwezoqoqosho kunye nophuhliso olukhawulezileyo kwimveliso yokutshiza. Abavelisi abakhulu behlabathi baye ngokuthe ngcembe baseka amashishini apheleleyo okanye amashishini axhaswa ngemali aphesheya eTshayina ukuba bazibandakanye kwimveliso yeemveliso kunye nokukhuthaza ukukhula okukhawulezayo konikezo.
Olu khuphiswano phakathi kwamashishini luye luqatha ngakumbi. Kukho izithintelo zobugcisa kunye nezemali kushishino lokutshiza. Okwangoku, uphawu oluphambili lomkhonto wokutshiza emhlabeni lubandakanya i-SATA yaseJamani, i-zeniste Iwata yaseJapan, iqela laseMelika lokugqiba ukupeyinta, i-American gurik, umzobo waseSwitzerland Jinma, i-Wagner yaseJamani, iklabhu yodidi lwe-xucannak yaseJapan, njl njl. Uphuhliso lweshishini lokutshiza ngemipu yehlabathi kunye nenkqubela phambili yetekhnoloji, ngakumbi nangakumbi amashishini angena kushishino, okwenza ukhuphiswano lwentengiso lube mandundu.
Amandla okuqamba izinto ahlala ephucuka. Kwiminyaka yakutshanje, kuqhutywa yimfuno yentengiso kunye nophuhliso lwesayensi kunye netekhnoloji, amandla emveliso kumatshini wokutshiza wemipu sisoloko siphucuka, iintlobo zeemveliso zemipu yokutshiza zihlala zisanda, ukusebenza kuqhubeka kuphucuka, kunye nokwabelana ngentengiso. Imipu yokutshiza engenamoya, imipu yokuzitshiza ngokuzenzekelayo, imipu yokukhuselwa kwendalo kunye nezinye iimveliso ziyanda.
I-airbrush sisixhobo esinamandla sokuyila esinokuma sodwa njengesiteyitimenti sobugcisa okanye sibandakanywe “kwibhokisi yesixhobo” yokudala yokuvelisa ubutyebi obuhlukeneyo bobuchule obahlukeneyo.
Okwangoku, kumazwe aphuhlileyo amashishini asakhasayo imveliso ye-airbrush kwimodeli yeemoto kunye nokwenza imveliso ngokubanzi ikwinqanaba eliqhubela phambili, amashishini amakhulu ehlabathi ajolise ikakhulu e-USA naseJapan. Okwangoku, iinkampani zangaphandle zinezixhobo ezingaphezulu, ezomeleleyo zeR & D, inqanaba lobugcisa likwisikhundla esikhokelayo.
Nangona ukuthengisa ibrashi yomoya kuzisa amathuba amaninzi, iqela lofundo-nzulu lincomela abangeneli abatsha abanemali nje kodwa ngaphandle kwenzuzo yezobuchwepheshe kunye nenkxaso esezantsi, musa ukungena engxakini yebrashi ngokukhawuleza.